Malunga noDaLian ItekUbukhulu
I-Dalian TekMax, eyasekwa ngo-2005 ngemali eyinkunzi ebhalisiweyo ye-RMB20 yezigidi, ishishini eliphambili kwezobuchwephesha eligxile kugqirha, uyilo, ulwakhiwo, uvavanyo, ukusebenza kunye nokugcinwa kwenkqubo yemo engqongileyo elawulwayo. Ukusukela oko isiseko, inkampani ibigxile kwicandelo lokucoca itekhnoloji kunye nolawulo lwesicelo, yaqokelela italente yolawulo lobunjineli bokucoca ngaphezulu kwabantu abangaphezulu kwama-80, kunye nabasebenzi bezokwakha abaqeqeshiweyo abangaphezulu kwama-400 abantu, kwaye yakha inani uyilo kunye namaqela okwakha akumgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu.
Inani labasebenzi bezokwakha abaqeqeshiweyo
Uyilo lobunjineli bokucocwa kobunjineli kunye namandla okwakha
Isakhono soyilo lobungcali kunye nolwakhiwo kubunjineli bokucoca. Inkampani iye yagxila kwicandelo lokuhlanjululwa komoya kwaye izibophelele kulawulo lwezinto ezingaphakathi endlwini iminyaka emininzi. Iiprojekthi zokucoca ziyilelwe kwaye zenziwa zibandakanya amashishini afana nokuchaneka kwe-elektroniki, i-biochemistry, amayeza kunye nempilo, ukuveliswa kwemizi-mveliso, ukutya njalo njalo, kuyilo olomeleleyo nolunobungcali kunye nokwakha amandla kwiiprojekthi zokuhlanjululwa.
Sisekele umthengi-centric "ukoneliseka kwabathengi ngobunjineli obucwangcisiweyo" kwaye samisela indlela yolawulo lomgangatho wokuthatha "ukwaneliseka kubanini kukusukela kwethu" njengesijolise. phucula ulawulo, kwaye uhambise iiprojekthi zokucoca ezonelisayo kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu kubaninizo.
Sifumene intembeko kunye nenkxaso kubathengi
Ukusukela oko yasekwa, ngobuchwephesha bobuchwephesha, ulwakhiwo lwenzululwazi kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo, iTekMax ibonelele ngenkonzo yobungcali kumashishini ahlukeneyo awaziwayo, anje ngeTshayina Academy of Sciences, Hisense, Haier, Yili, Mengniu, Meihua, Nestle, Reyoung, Xiuzheng, CR Sanjiu, ZBD, TASLY, njl
Ukubambelela kwinjongo yeshishini le "mbono yoyilo oluphambili, ikowuteshini efanelekileyo yeprojekthi, umgangatho wokwakha ogqwesileyo, ukuhanjiswa kweprojekthi ngexesha elifanelekileyo kunye nokunyaniseka emva kokuthengisa" iminyaka emininzi, iTekMax yenze amakhulu eeprojekthi zokuhlanjululwa, eziye zafumana uhlolo lwamasebe anegunya , Ufumene imvume kumasebe afanelekileyo, wazuza ukuthembela nenkxaso kubathengi ngokunjalo.
Igumbi elicocekileyo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Ifestile yegumbi elicocekileyo, Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Inkqubo yaManzi aBandayo, Igumbi lokucoca umoya ococekileyo,